July 2013 ~ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မိတ္ထီလာမြို့
အလှတရားတွေကို အမှောင်ထူထူချထားရင်းနဲ့ ပေ့ါ။
ရင်ခွင်ငယ် ချော့သိပ်လို့ 
ထာဝရ ရင်တွေအေးလို့ 
မနက်လင်းစ ပန်းတို့ နဲ့ အတူ
မေမေ မျက်နှာ မှော်ဖူးခွင့်ကို
ရေခြားမြေခြား အလွမ်းများနဲ့ 
မေ့ သမီးရင် အလွမ်းပန်းတွေစိုက်လို့ နေခဲ့မိတယ်
မေတ္တာရေ တွေ သွန်းလောင်းခဲ့တဲ့
စင်္ကြ၀ဠာ ကြီးတစ်ခုလုံး အပြုံးတွေတောင်
ခိုစီးလို့ နေခဲ့ပီ မေမေ။
ပြုံးပန်းတွေ အလှဆင်လို့ 
မေမေ တစ်ယောက် ကျမ်းမာပါစေ။
♥♥မာတာမိခင်ကြီး ကိုအရမ်းသတိရလို့ နေမိပါသည်။♥♥
ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းမူတွေနဲ့ အတူ
ခါးသီခြင်းတွေကို အစပြိုးလို့ 
ယုံကြည်မှု့ တွေ က အမှိုက်တစ်စလို ပါလား.......
နင်......အိမ်မက်ခါးခါးတွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ နေ့ က
နင်....ခံစားမှု့ ကို နှစ်သက်ရာလို့ သဘောထား
ငါ့ ......ရွက်တိုင်နဲ့ အတူ နင်ခရီးနှင်ခဲ့တယ်။
သူနဲ့ ကျမ အချစ်တွေကို
စာဖွဲ့ လို့ နေခဲ့ကြတယ်။
♥♥♥ အမုန်းပင်ကြားက အချစ်မြက်တစ်ပင် ♥♥♥
အချစ်နဲ့ ကျမ လိုက်တမ်းပြေးတမ်း
မနှစ်မြို့ လို့ မဟုတ်ပါဘူးချစ်သူ
နှစ်ချို့ သွားမှာ စိုးထိတ် မိလို့ ပါ။
ချစ်စရာကောင်းသော စကားသံတစ်ချိူ့ က
သခင်မဲ့ ပန်း ရင်ဝှက်အလွမ်း....
နယူတန်လို့ တော့ဘက်ပြန်မှု့ မရှိဘူး
အဝေးကပင်ဆွေး အဆွေးအနှစ်တွေနဲ့ 
ရင်နင့်အောင်လည်း မပြောပါနဲ့ 
ကြွေလွင့်အောင်လည်း မလုပ်ပါနဲ့ 
ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ဘူးတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ။
၀မ်းနည်းပူဆွေးမှု့ တွေကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ဘူးတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ။
ဘယ်လို အရာတွေကများ ငါ့ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို ဆွဲလှုပ်ကိုင်ရမ်းခဲ့ပါလိမ့် မသိချင်ပေမဲ့ အသိတွေက နက်နက်နဲနဲကို တိုးဝင်နေခဲ့ပြီ....
ကျမဘ၀မှာလေး သိပ်ချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်....လူတိုင်း လူတိုင်းအချစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပျော်ဝင်နစ်မြုပ်ဖူးသူဆိုတာမရှိသလောက်ရှားပါးခဲ့တာပဲလေ..အချစ်ဆိုတဲ့အရာက နှစ်သိမ့်ခြင်း ၊ ကြည်နှုးခြင်းတွေကို ပြိုင်တူခံစားခဲ့ဘူးတာ ကျမတစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ဘူးမယ်ထင်တယ်.....ဘာလိုလဲဆိုတော့ တစ်ချိန်ထဲမှာ အပြုံးတွေကိုယ်ဆီတပ်ဆင်ပြီ ရယ်မောခဲ့ဘူးသလို တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကျမမျက်ဝန်းမှမျက်ရည်တွေတစ်သွင်သွင်ကျခဲ့ဘူးတယ်....
အတ္တင်္ကြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာအချစ်ဆိုတာရှိခဲ့ရဲ့လားးးးးးးကျမပြန်သုံးသပ်ကြည့်မိခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်အခါခါဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ.....ဒါပေမဲ့လည်းလေ နွေခေါင်ခေါင်မှာကြွလွင်ရမဲ့
သစ်ရွက်ကြွေက့ မိုးဥတုကိုမှန်းမျှော်ခဲ့ဘူးတဲ့ ရွက်နုသစ်နဲ့ တူနေပြန်တယ်......အဲဒါကို အချစ်လို့ ခေါ်တယ်ဆိုရင် ကျမအချစ်က မိုက်ရူးရဲဆန်ခဲ့တာပဲနော်.......
တစ်နေ့ မိုးတွေကလည်း တစ်ဖွဲ့ ဖွဲကျနေလေရဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အတ္တလွန်ဆွဲပွဲကြီးကလည်း သည်းသည်းမည်းမည်းမိုးနဲ့ တူ အပြိုင်အဆိုင်ရယ်ပေါ့....ကို ....ကျမမှာရှင်းပြပိုင်ခွင့်တောင် မရှိတော့ဘူးလားးးအချစ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်ပါလာရင် ဘယ်လိုအရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာ မင်းနားလည်တယ်ဆိုရင်..ဒီလမ်းအတိုင်းမင်းပြန်သွားလိုက်ပါ..ခရေ.....ခရေ ဘယ်လိုပြန်နိုင်မှာလဲ ကိုရယ် ကျမကိုယ့်ကို ရှင်းပြခွင့်တော့ရှိရမှာပေါ့......တော်ပါကွာ အပေါ်ယံ စကားလုံးတွေနဲ့သရေပေါ်အိပ်ပြီး သရေနားစားနေတဲ့ မင်းလို မိန်းကလေးအတွက် အချစ်ဆိုတာကို ပြောဖို့ မတန်ပါဘူးးးးးငါ့ရဲ့အချစ်တွေက မင်းလို မိန်းကလေးမျိူးကို ချစ်ခဲ့မိတာ မဟာအမှားကြီးပဲ သိလားးးးးပြောရက်လိုက်တာ ကိုရယ်......ခရေ ကအဲလိုလူစားမျိူးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးးးးးးကိုထင်သလို ကျမက အပေါ့စားမိန်းမ တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ရပါဘူး ....ကိုရယ်........
ခရေ...ဒီနေ့ အလုပ်ကတော့ အဆင်ပြေသလိုတော့ဖြစ်သွားပြီ မင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာထိရတယ်ဆိုတော့ မင်းလည်းကျေနပ်မှာပါ..ကျေနပ်ပါတယ် ဦးမင်းခေါင်......တစ်ဝက်တပြတ်နဲ့ အသံတွေက ဝေးဝေး၀ါးဝါးရှိနေဆဲ...ပျော်နေကြတဲ့အသံတွေကနားထဲမှာ ဗလောင်ဆူစွာ သံရည်ပူနဲ့ လောင်းထည့်နေသလို ခံစားနေရပြီ.......ဘာတွေလည်း ..ခရေဆိုတဲ့ သိပ်ချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောက်င်္ကျား တစ်ယောက်ရှိတဲ့အိမ်မှာ ဘာကြောင့်ရောက်နေခဲ့ရတာလည်းးးဘာတွေကို ကျေနပ်ပျော်ဝင်နေကြတာလည်း အရှက်မရှိလိုက်တာနော်...စဉ်းစားရင်းတောင် စိတ်က နေလိုထိုင်လို့ မရဖြစ်နေပြီ.......အဲဒီနေ့ က ကိုကိုတစ်ယောက် ဦးမင်းခေါင်း အိမ်ကို လာရသည့်ကိစ္စက ဖေဖေ ရဲ့ ပွဲရုံ ကိစ္စ နဲ့ ခိုင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်.။ .......တောက်.....ဘာတွေလည်းကွာ....မင်းကချစ်ပါတယ်ကိုရယ် ...ကိုတစ်ယောက်တည်းကိုပဲချစ်ခဲ့ တာပါ.......အဲဒါလား အချစ် မင်းအချစ်တွေက မသန့်ရှင်းလိုက်တာ ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာနော်....ပြေးထွက်သွားခဲ့မိပြီ......မကြားနိုင်ဘူးးးးမင်းတို့ ရဲ့အသံတွေကို.....ခရေဆိုတာ ငါ့ရဲ့ဘ၀ထဲမှာ အပြီးအပိုင်ထွက်သွားခဲ့ပြီ.....
မေမေ...ဒီမှာ ခရေဆေးဝယ်လာတယ်မေမေ.မေမေထသောက်လိုက်အုံးနော်....အင်းပါ သမီးရယ် ငါ့သမီးလေးလည်း ကျောင်းကတစ်ဖက်နဲ့ အလုပ်ကလည်းလုပ်ရသေးတယ် မေမေ သမီးတစ်ယောက် သနားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ အော် မေမေရယ် ခရေက မေမေကို ဒီလိုမျိူးလုပ်ပေးနေရတာကိုက ကျေနပ်နေခဲ့ပါပြီမေမေ..ဒီနေ့ ဦးမင်းခေါင် ရောင်းလို့ မထွက်ဖြစ်နေတဲ့ မြေကွက်ကို သမီး အသိတစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်ပေးလိုက်တာ တော်တော်ကို ရလိုက်တယ် ဒါကြောင့် သမီးကို မုန့် ဖိုးပေးလိုက်တယ် မေမေရဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်နဲ့ မေမေကိုလုပ်ကျွေးနေရကိုက သမီးဝမ်းသာနေပြီ မေမေ မေမေ.....စိတ်မကောင်းမဖြစ်ရဘူးနော်....မေမေကျမ်းမာမှသမီး ဒီလို အလုပ်လုပ်ရင် ကျောင်းတက်နေရတာကလွတ်မှာလေ မေမေမြန်မြန်နေကောင်းရမယ်နော်.......နောက်ကို အဲလို မပြောရဘူးနော်.....သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ အပြုံးကိုယ်စီနှစ်မြူပ်စီးဝင်နေခဲ့ ပြီလေ။။
ကိုကို မင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ.....အသံကြားရုံနဲ့ မင်းရဲ့ခရေကဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာက အခုခာတ်နဲ့ တွက်ရင် ရယ်စရာကောင်းနေပြီ...တော်ပါကွာ သူတို့ ပျော်နေတဲ့ အသံငါ့ နားနဲ့ ကြားခဲ့ရတာလေ....သစ္စာမရှိတာ မိန်းမတွေရဲ့ အလုပ်တစ်ခုထင်ပါရဲ့ကွာ ငါ့မှာတော့ချစ်လိုက်ရတာ တန်ဖိုးထားလိုက်ရတာ......ဟာ.....လောကကြီးကမတရားလိုက်တာ..အဲလိုတော့မပြောနဲ့ ကွာ လောကကြီးကတရားတယ် လူတွေကမတရားတာ သိလား ဖြစ်နေတဲ့ အရာပေါ်မှာ အမှန်အတိုင်းလက်မခံနိုင်ကြတာ......ဒါကြောင့်လည်း ရတာမလို လိုတာမရဖြစ်နေတာပေါ့ အဲဒီစကားက မင်းအတွက် ပိုပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ် ဘာလို့ လဲဆိုတော့မင်းဆိုတဲ့ လူက အတ္တကိုပဲရှေ့ တန်းတင်နေခဲ့တာလေ မင်းက အမြဲမှန်ပြီးးးးးးခရေ ကတော့အမြဲမှားနေခဲ့တော့ပေ့ါ.......အချစ်မှာ အတ္တတွေ ၊ မာန တွေပါလာရင် ဘယ်တော့မှ ခရီးမဆုံးတော့ဘူးးးးးးးကိုကို.....မင်းတို့ အစားရင်လေးပါတယ်ကွာ....သံသယ..သံသယ တော်တော်ကိုကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ကွာ...
အဖြစ်အပျက်ရဲ့ အစအဆုံးမှာ ရှင်းပြခွင့်မရလိုက်တဲ့ ကျမရဲ့ ဘ၀က အချစ်ကသတ်လို့ သေခဲ့ရပြီ.....စကားလုံးတွေရဲ့ သတ်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပြီ ........မှားပါတယ်လို့ လည်း ပြောခွင့်မရှိ မှန်ပါတယ်ဆိုလည်း ၀န်ခံခွင့်မရှိပဲ ကျမချစ်သူရဲ့ စွန့် ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီ......အခုတော့လည်းလေ နောင်တဆိုတာ ကျမအတွက် မဟုတ်ဘူးထင်တယ် အချစ်ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာလို့ ပြောရမယ် .......အတ္တကြီးပဲ အမြဲတမ်း စိုးမိုးထားချင်တဲ့ ကျမရဲ့ ချစ်သူလက်ထဲကနေ လွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့ပြီ....
ကျမနေပျော်တာမဟုတ်ပေမဲ့ နေသားကျနေခဲ့ပြီကွယ်........အမှန်တော့ ပန်းခရေဆိုတာ မြေခပေမဲ့ ရနံသင်းတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့မှန်း ကို တစ်ယောက်မသိနိုင်ခဲ့လေတော့ ကျမသိအောင် နေမပေးတော့ပါဘူးးးးးးကိုရယ်........အချစ်မှာ အတ္တကင်းကင်းနဲ့ ချစ်နိုင်ဖို့ ကို ပဲ ကျမမျှော်လင့်နေခဲ့မိပါပြီ...................
ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ.......ဟန်နီရဲ့ စာတွေလည်းတော်တော်ကိုဖတ်ရလို့ အိပ်ငိုက်နေပြီထင်တယ်း) ဒီတော့ ဟန်နီကို တစ်ချက်လောက်ကူညီပါနော်း)
(၁) အချစ်မှာ အတ္တဆိုတာ ပါသင့်ရဲ့လားးးအချစ်ဆိုတာ အတ္တရဲ့ ဇာတ်မြစ်တစ်ခုလို့ ပြောရင် ကောလက်ခံနိုင်ပါမလား။
(၂) အချစ်ဆိုတာကို ကော ဘယ်လိုခံယူထားကြပါသလဲ။
(၃) အချစ်ဆိုတာ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းသက်သက်ပဲလား။
အချစ်ကို အတ္တကင်းကင်းနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်းဖြင့်
ယုံလွယ်အောင် စကားတွေနဲ့ ချည်နှောင်ပြီ
မာယာတွေနဲ့ ရောပြီ ကျခဲ့တဲ့မျက်ရည်ကို
နင်ရှေ့ မှာ ဒူးထောက်ခဲ့ဘူးတယ်........
နင့်ရဲ့ တစ်သက်တာ အလွှဲတွေရှိခဲ့တယ်.
နှစ်သိမ့်ခြင်းဆိုတာ အားနည်းသူရဲ့ ခံယူချက်ဆို
လူမြင်တကာကို ကြူပြမနေပါနဲ့ 
ခါချမယ်ဆို ငါ့အသည်းက စက်ယန္တာရားတစ်ခုမဟုတ်ဘူး........
ဒီပေလွှာ ဒီစာစကားနဲ့ 
ငါ့ ရဲ့ သစ္စာမှန်ကန်ခဲ့ရင်
နှလုံးသားမှာ အလွမ်းသံလေး ကင်းပါရစေ.........
နေမ၀င်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ 
အချစ်ဆိုတဲ့ မိုးခြိမ်းသံကြားရရုံသက်သက်နဲ့ 
မနွမ်းခင်ကတည်းကပဲ ပဲ့ကြွေခဲ့ရတဲ့ ငါ့နှလုံးသားကို
▒▐█▀▀▀░ ▄▀▄ ▄▀▄ █▀▄░░░░░░▒▐█▀▄░ ▀▄░▄▀ █▀▀
▒▐█▒▀█▌ █░█ █░█ █░█░░░░░░▒▐█▀▀▄ ░░█░░ █▀▀
▒▐██▄█▌ ░▀░ ░▀░ ▀▀░░░░░░░▒▐█▄▄▀ ░░▀░░ ▀▀▀
အမုန်းတရားတွေကို စီကာကုန်ပေးပါမယ် ချစ်သူ..
love is alive တဲ့အချစ်ဆိုတာ ရှင်သန်ခြင်းဆိုပဲ အမှန်တရားရဲ့နားခိုရာချစ်သူအရိပ်စေရာ ခံစားချက်ကိုဖော်သွင်းပြီး ပုံဖော်ကပြနေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ တူတယ်....အများးသုံးနေသလိုအမည်ဖော်ချင်ပေမဲ့လည်း အသက်မ၀င်တဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ဆေးခြယ်သလို မလှမပစုတ်ချက်တွေနဲ့ အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတယ်..ပါးပါးလျလျလေး နွမ်းလျစွာနဲ့ လေနုအေးတွေတစ်ဖြူးဖြူးတိုက်ခက်ပြီ ကျမရဲ့နံရံတစ်ခုပေါ်ဖြာကျလျက်ရှိသော သက်မဲ့ခနာကိုယ်တစ်ခုက အရွေ့ ဆိုတာကိုကြောက်သလို ရပ်ကြည့်နေရမှာကိုလည်း မလိုလားခဲ့ပါဘူးးးးသူတကယ်တောင်းတနေတာက ချစ်သူရဲ့ မာယာကင်းတဲ့ချစ်ခြင်းတစ်စုံပါ............................
မှော်ဝင်အပြုံး နဲ့ အတူ
နင် ငါ မသိနိုင်တဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ
ယိုင်နဲ့ နဲ့ အလွမ်းကြားမှာ
ဒဏ်ရာကို ကိုယ်စီပွေ့ ဖက်
ကြွေလျက်နဲ့ လည်း နွမ်း
နှလုံးသားမှာ အမုန်းတံတားလေး ခင်းခဲ့သည်.။
Posted on 7/07/2013
အသည်းမဏ္ဌိုင် စိုက်ပြီး ရွက်လွင့်ချင်သလို ရွင်လွင့်ရအောင်
ငါ့ နှလုံးသားက နင့် ခိုင်းစေလို့ ရတဲ့ ကော်ပတ်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
ချစ်လား ချစ်လား ခဏ ခဏမမေးနဲ့ 
ချစ်ရင် တွဲမယ် မချစ်ရင် ခွဲမယ်........
အချစ်ရပ်ဝန်းမှာ အလွမ်းမိုးစက်တွေနဲ့ အတူ
ဖျက်ခနဲ့ တွေ့ လစ်ခနဲ့ ခုန်တာ အဲဒါအချစ်တဲ့
အတွေးပင်လယ်ထဲမှာ သူရယ် ကိုယ်ရယ်
နယ်ရုပ်လေး တစ်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့မည် ဆိုပါလျှင်.
အတိတ်ရဲ့ တည့်တည့်မှာ မျှော်ကြည့်ဖို့ မကောင်းတဲ့
အက္ခရာ မစီ စာမညီပဲ
မေတ္တာပျက် ဆုတောင်းခြင်းမျိူး မဖြစ်ပါရစေနဲ့ကွယ်.........
ပန်းတော့ပန်းပဲ ......ဒါပေမဲ့ တစ်ပွင့်ပန်း...
သွေးစက်ကျရာ နှလုံးသား အက်ကွဲချင်တယ်..
ပိုးဖလံလို မီးကမ္ဘာဆိုတဲ့ အလင်းတောမှာလည်း
အကြင်နာ ရင်မှာ မှတ်လို့ 
ငါရဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ အမုန်းတံတားလေးတည်ဆောက်ခဲ့သည်..
အလွမ်း မုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်ခဲ့ဖူးပြီ..........
အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို အဖြေရှာ
ဘာလဲ အချစ်ဆိုတာ ????
တစ်ခါတလေ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်က လိုက်နေရင် သူကပြေးတတ်တဲ့ ယုန်သူငယ်လေး တစ်ကောင်နဲ့ တူတယ်...
တစ်ခါတလေ အချစ်ဆိုတာ ကြေကွဲမှု့ ကို ခြေရာခံပြီး လွမ်းဆွတ်တမ်းတမှု့ တွေကို ပေးတတ်တဲ့ အလွမ်းသမားတစ်ယောက်နဲ့ တူတယ်..
နေ့ စွဲတွေကို ရေတွက်ရင်း
ကျောခိုင်းသွားခဲ့တဲ့နင်ရဲ့အချစ်တွေကို
အမှတ်မရှိ တဲ့ ငါ့အသည်းက
နင့်ရဲ့ အသက်မပါတဲ့အနမ်းတွေနဲ့ အတူ
♥♥♥အလွမ်းတွေငိုတဲ့ ကျမရဲ့ ညနေခင်း ♥♥♥
ကျမ ရဲ့ ညနေခင်းတွေ
လောင်ရိပ် အမိုးခံခဲ့ရတဲ့နေ့ က
♥♥♥ ရင်ဝှက်ပန်းချီကား ♥♥♥
ဒီနှစ်နဲ့ ဆို ရာသီစက်ဝန်းအလွန်ကိုတောင်
love is alive တဲ့အချစ်ဆိုတာ ရှင်သန်ခြင်းဆိုပဲ အမ...
မေတ္တာပျက် ဆုတောင်းခြင်းမျိူး မဖြစ်ပါရစေနဲ့ကွယ်.......
ငါရဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ အမုန်းတံတားလေးတည်ဆောက်ခဲ့သ...